स्थानीय इतिहास संग्रहालय (कलुगा): ठेगाना, कार्यक्रम। कलुगा शहर: आकर्षण
यात्रा गर्दै, दिशाहरू
स्थानीय लोर (कलुगा) को संग्रहालयमा प्रदर्शन को सबै भन्दा अमीर संग्रह छ, जसको धेरै तारीख 17 औं शताब्दी सम्म। संग्रहको एकाइहरूको कुल संख्या 100,000 वस्तुहरू भन्दा लामो छ। यसको शुरुवातमा संग्रहालयले दस शाखाहरू एकत्र गरे र 2016 मा लिइएको निर्णयले संयुक्त संग्रहालय-संरक्षितको स्थितिमा सारियो।
स्थानीय ढोकाको पुरानो संग्रहालय
स्थानीय लोर (कलुगा) को संग्रहालय 1897 मा स्थापित भएको थियो। शहरको सबैभन्दा पुरानो इमारतहरु मध्ये एक, चैम्बर जसले एक पटक व्यापारी कोरोबोभ (17 औं शताब्दी) सँगै आफ्नो स्थानको लागि रोजिएको थियो। पहिलो प्रदर्शनीमा पाँच प्रदर्शन कार्यक्रमहरू थिए, जहाँ पुरातात्विक खोजहरू, पुरानो सिक्काहरू, विगतका घरका सामानहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। संग्रहालयले हप्तामा दुई पटक मात्र काम गरे, वर्षको लागि दर्शकहरूको संख्या धेरै सानो थियो - केवल 500 मानिसहरू।
1949सम्म, स्थानीय विद्या (कलुगा) को संग्रहालय को बारे मा 1000 वस्तुहरु लाई राखयो, जसमा अलेक्जेंडर पुककिन को पत्र, एन.एन. गोगोल को कलम र 1915 मा संग्रहण गरियो।
सन् 1918 पछि संस्था "प्रांतीय ऐतिहासिक संग्रहालय" मा परिणत भयो। भवन, जुन अहिले स्थानीय इतिहासको कलुगा क्षेत्रीय संग्रहालय, 1922 मा सारिएको छ। पहिलो शाखा 1924 मा विलय भएको थियो, संग्रहालय "गुड डेड" मा, एक कला संग्रहालय सन्तुलनमा पठाइएको थियो। पछि 1925 मा, धेरै शाखाहरूको भागको रूपमा सामान्य विज्ञान व्यवस्थापनको क्षेत्रफल अन्तर्गत पारित भयो।
30 को दशक मा धन को मुख्य पुनःस्थापना भयो, जब स्थानीय विद्या (कलुगा) को संग्रहालय समाप्त भयो चर्च र राष्ट्रीयकृत को सम्पत्ति को सम्पत्ति को दोश्रो गर्न को लागी शुरू गर्यो। 1939सम्मको संग्रहमा 10 हजार वस्तुहरू थिए।
हाम्रो दिन सम्म युद्धबाट
ठूलो देशभरी युद्धको क्रममा संग्रहालयका हल्सले केवल 10 महिनाको लागि काम गरेनन्, बाकी समयको उद्घाटन जनताको लागि खुला थियो। व्यवसायको दौडान 78 दिनसम्म संग्रहालय बन्द भयो। ऐतिहासिक सम्पदा खाली गर्न सकिएन र भरपूर वर्ष (1942-43 जीजी।), कर्मचारीले क्षतिको हदसम्म गणना गरे। अन्तिम दस्तावेजले बताएको छ कि 18 औं शताब्दीको क्लासिकवादसँग सम्बन्धित संग्रहालयको रकम लुटिएको थियो।
सन् 1904 मा संग्रहालय एक क्षेत्रीय राज्य भए, 1945 सम्मको रकम 7,712 प्रदर्शन थियो, जसका लागि 2,143 इकाइ सार्वभौमिक पहुँचको लागि खुल्यो। यस अवधिमा, संस्थाको कर्मचारीले सामग्री, दस्तावेजहरू र महान देशभरी युद्धको सम्झनाहरू एकत्र गरे जुन 50 र 60 मा गठनको आधार बनेको छ। यस क्षेत्रमा धेरै लोक संग्रहालयहरू छन्। त्यसपछि, तिनीहरूमध्ये6वटा शाखाहरू थिए र स्थानीय इतिहास संग्रहालय (कलुगा) भित्र प्रवेश गर्यो। आज संस्थाले दर्शकहरूलाई 10 शाखामा निम्ता दिन्छ।
स्थानीय लोर (कलुगा) को संग्रहालय 100 भन्दा बढी वर्षको लागि अस्तित्वमा रहेको छ, सबै समय संग्रह को संग्रह लगातार बदलिएको छ र अहिले सम्म 100 भन्दा बढी अनौठो प्रदर्शनीहरू छन्। 1981 मा, प्राचीन मंदिर घरको वास्तुकला, जसमा संग्रहालय स्थित छ, र मानहरूको संग्रहले एकल ध्वनि प्राप्त गरेको छ, यसका लागि धन्यवाद कि उनीहरूलाई एकजुट गर्ने, लेनिनग्राद कलाकार र वैज्ञानिकहरूबाट प्रदर्शन गरे।
संग्रह को सबै भन्दा उल्लेखनीय प्रदर्शन वास्तुकला परिसर 1808 मा बनाइएको छ, जहाँ स्थानीय इतिहास संग्रहालय (कलुगा) स्थित छ। मुख्य घरको इतिहास बताउनुहुन्छ कि एक पटक यसलाई महल भनिन्छ, र उनी शहरमा सबै भन्दा धनी जनावर थिए। इमारत को मुखौटा पुरातन ग्रीक महाकाव्य को इतिहास देखि उच्च राहतहरु संग सजायाइएको छ, सामने प्रवेश द्वार स्तंभ, एक आर्क र नाजुक जाली बाड़ संग सजाया गएको छ, एक विशाल गेट संग युगल। आंगन को भित्री हिस्से मा एक समारोह को विंग, वाहक को एक कोठा, एक आवरण गैलरी स्पेस बंद गर्दछ, सफेद पत्थर को छत मा राखिएको छ, टुस्कन स्तम्भ संग सजाया।
संग्रहालयको विवरणको विवरण
महल को आंतरिक आन्तरिक कलपुग को लागि प्रसिद्ध थिए, उनको सजावट मा काम इटाली वास्तुकार एस Campioni को नेतृत्व मा थियो। पहिलो तल्लामा, जुन घरको आवश्यकताको लागि कोठा कोठामा प्रयोग गरिन्छ, अब प्रकृति विभागको सामग्री प्रदर्शनमा छन्।
दोस्रो तल्लामा, ग्यारह कोठामा, क्षेत्रको इतिहासमा समर्पित एक प्रदर्शनी राखिएको थियो। पहिलो खण्ड पुरातात्विक खोजहरू भरिएका छन्, जुन पुरातन जनहरूको उच्च स्तरको विकास देखाउँछन्। अर्को रोजगारीको जीवन, गहनाहरू, व्यापारी वेशभूषाहरू Rusich। पत्रुस द ग्रेटको शासन पहिलो औद्योगिक उत्पादनको उपस्थितिद्वारा चिन्हित गरिएको छ। संग्रहालय को हल मा कलुगा को उपाध्यक्ष को सम्मान मा इम्प्रेशन कैथरीन II द्वारा प्रस्तुत घडीहरु लाई प्रदर्शित गरिएको छ।
1812 र महान देशभरी युद्धको लागि समर्पित हॉलहरूमा प्रदर्शनको एक विशाल रकम एकत्रित गरियो। ऐतिहासिक घटनाहरु को अतिरिक्त, संग्रह मा 19औं शताब्दी को साहित्य को सांस्कृतिक विरासत शामिल छ जो कलुगा भ्रमण गरे; यहाँ एन गोगोल, एफ। एम। मित्रतावीस्की, ए। पी। चेखोव र अन्य लेखकों संग सम्बन्धित हो।
कलुगा को क्षेत्रीय क्षेत्रीय संग्रहालय शाखाहरु को भ्रमण गर्न को निम्ती:
नामहीन उचाई। विस्तार ग्रेट फिनिटरी युद्धको समयमा क्विबिस्क जिल्लाको स्वतन्त्रताको लागि समर्पित हुन्छ, जब 18 जना समूहको समूहले 224.1 को महत्त्वपूर्ण उचाइ कब्जा गर्न सकेन। संग्रहालय को नाम VE Basner गीत "एक अज्ञात ऊंचाई मा" द्वारा दिइएको थियो, सिबेरीक योद्धाहरु को यस फीचर को लागि समर्पित।
Borovsk । शाखा पुरानो शहर बोरोस्कोमा स्थित छ र यस इतिहास को प्रतिबिंबित गर्दछ। संग्रहालय वर्गहरू व्यापारी वर्गका लागि समर्पित छन्, पुरानो विश्वासी परम्पराहरू, दुई मठहरूका इतिहास - पोकोरोस्की र पफ्नूयुव-बोरोव्स्की - विस्तारमा जाँच गरिएको छ। प्रदर्शनीको विषयले प्राचीन फ्रेशको टुक्रा, Nativity कैथेड्रल र मठहरू, सिरेमिक, 16 औं शताब्दीका हातखुट्टा ईटाहरूका अंशहरू समावेश गर्दछ। अभिलेखीय फोटोग्राफहरूको ठूलो संग्रह बोयरिना मोरोजोवाको चिहानमा खुवाउने बारेमा बताउँछ। व्यापारी र फिलिस्टाइन परिवारको दैनिक जीवनका विषयहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
Zaitseva Gora। वारसा राजमार्गको लागि जर्मन आक्रमणकारीहरूको साथ सोभियत सेनाको लडाकुको लामो इतिहासमा विस्तार गरिएको छ र यो साम्राज्य उडानहरु को लागि जर्मन को टुक्रा, जसको एक ज्येतेव गोर थियो।
इलिन्की सीमाहरू। स्मारक सैन्य विद्यालयहरूको Ilyinsky विद्यार्थीहरूको भित्तामा समर्पित छ। 12 दिनका लागि तिनीहरूले आक्रमणकारीहरूले मस्कोको आक्रमण फिर्ता गरे।
Kozelsk। विस्तारले कलुगा क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो शहरहरु को इतिहास को प्रतिबिंबित गर्दछ, यसको इतिहास 12 औं शताब्दी देखि शुरू हुन्छ। संग्रहालय व्यापारीहरु Tsyplakovo को पुरानो हवेली मा स्थित छ। हलहरूमा पुरातात्विक खोजहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, प्राचीन रुसको इतिहासको वस्तुहरू। प्रस्तुत पनि दुई विषयगत प्रदर्शनी "शैतानको किरण" (9 -10 शताब्दी) र "12-13 शताब्दीका वाइचेस्की काल्पनिक परिसर"। एक मध्य स्थान मध्ये एक कोजलस्काया युद्ध को लागि समर्पित युद्ध ब्लेड हो।
Mosalsk। संग्रहालय शहरको इतिहासमा समर्पित छ, क्षेत्र, इतिहास, जनगणना, विभिन्न वर्षहरूको घटनामा खण्डमा विचार गरिएको। आगन्तुकहरूको जीवनशैलीको कारण पूर्व क्रांतिकारी रूसको किसानको लग हुटको पुनर्निर्माणको कारण हो।
म्यानर रिजर्व "पोल्योनीनी प्लांट।" एक परिसरमा गन्कोरोभ र शेचेपोककिनको स्वामित्वमा दुई सम्पत्तिहरू एकताबद्ध छन्। सम्पत्ति को सुविधा लिनन र कागज निर्माण को क्षेत्र मा यसको स्थान हो। यहाँ गोन्टोरोभ, संग्रहालयको ट्रांसफिगरेसन, पार्क र ग्रीनहाउस परिसरहरू, अस्तित्व र अन्य ऐतिहासिक आर्किटेक्चर वस्तुहरूको संग्रहालय-सम्पत्ति हो।
स्थानीय लोर को तास्सा संग्रहालय । टारसा शहरको पहिलो उल्लेख 1246 को इतिहास हो। शहर को संग्रहालय को हल मा वहाँ नैतिकता प्रदर्शनी, एक साहित्यिक प्रदर्शनी, खडा को एक अलग भाग को जीवन र लेखक को काम को लागि समर्पित छ के.जी. Paustovsky।
टास्काना संग्रहालय सर्भ्वेवा परिवार। हॉलहरूमा कविता मरीना सायटेतावाको जीवन र कामबारे बताइएको एक व्याख्या हो।
2016 मा, संग्रहालय नयाँ स्थितिमा सारियो र अब "कलुगा संयुक्त संग्रहालय-रिजर्व" नाम बन्छ। यसबाहेक त्यहाँ आन्तरिक पुनर्गठन प्रक्रियाहरू र नयाँ कार्यक्रमहरू तयार भइरहेको छ। तर स्थानीय ढोकाको संग्रहालयका गतिविधिहरू बाधा हुन सक्दैन, र पर्यटकहरूलाई भ्रमणमा निम्तो दिइन्छ:
कलगुगा क्षेत्रको इतिहास। 17 औं शताब्दीबाट क्षेत्रको आर्थिक विकासको अवधि विस्तार र दस्तावेजको जाँच गरिएको छ, शहरको भवन, सांस्कृतिक विकास, साहित्य र कलालाई धेरै ध्यान दिइन्छ।
कलगुगा क्षेत्रको प्रकृति। एक्सटेन्सनले क्षेत्रको भौगोलिक र भौगोलिक विशेषताहरूको विवरणलाई वर्णन गर्दछ, क्षेत्रमा उत्खनन वा निर्माण कार्यका क्रममा पाएको प्राग्राहक जीवन शैलीहरूको जीवाश्महरू प्रस्तुत गर्दछ। प्रायः विस्तार को क्षेत्र को वनस्पति र जीव को द्वारा कब्जा गरिन्छ, प्राचीन समय देखि प्रदर्शनी मा आधुनिक समय मा प्रतिनिधित्व गरिन्छ।
विदेशी जनावरहरू। उत्तेजना आगन्तुकहरूलाई संसारका विभिन्न देशहरू (दक्षिण अमेरिका, एशिया, अष्ट्रेलिया, आदि) को अनुहारमा प्रस्तुत गर्दछ, धेरै प्रदर्शनहरूले पानीको पानीको जीवनको प्रदर्शन देखाउँछ, रूसको केन्द्रीय पट्टीको चित्रण गरिएको छ।
सोभियतहरूको ब्यानर अन्तर्गत। कथा सोवियत शक्तिको गठन, 1941 सम्म क्षेत्रको विकासको बारेमा बताउँछ, नागरिक युद्ध, स्टकवानो आन्दोलन, दमनको समयमा प्रतिबिंबित व्यक्तिहरूको भाग्यको जाँच गर्दछ। समानार्थी उत्तेजनामा समर्पित विस्तारको केन्द्र विद्यालय कक्षा र सांप्रदायिक अपार्टमेन्टको तयार पारिएको इन्टरनेट हो।
ठूलो देशभरी युद्धको दौडान कलुगा क्षेत्र। विषयगत उत्साह युद्ध मा विजय को 65 औं सालगिरह को लागि हॉल मा आयोजित छ। प्रदर्शनीहरु कालानिक क्रम मा प्रस्तुत गरिन्छ, घटनाहरु को पाठ्यक्रम को वर्णन गर्दछ, नागरिकों को नाम सदैव - रियर मा आपरेशन र श्रमिकों मा सक्रिय भागीदार। मध्य स्थान डाईरामा "कलुगा को लिबरेशन" लाई दिइएको छ।
संग्रहालयको हलहरुमा अमीर संग्रहहरू एकत्रित हुन्छ, जुन यात्राहरूको लागि विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ। त्यसोभए, डेमब्रिस्टका कथाहरू, चिनियाँ भाषा र चिन्ताको इतिहास, 1812 को युद्धका घटनाहरू र धेरै अन्य चीजहरूको रुचि हो।
कलुगा अतिथिहरु स्वागत छ, स्थानीय विद्या को संग्रहालय (कार्य घन्टा - 9:30 - 17:30, टिकट कार्यालय 17:00 मा टिकट समाप्त हुन्छ)। शनिबार बिहान 11 बजे - 1 9: 00 बजे। सोमवार बन्द छ। टिकटहरूको मूल्य 100 rubles बाट सुरु हुन्छ।
विद्यार्थीहरू, पेंशनकर्ताहरू र स्कूलका विद्यार्थीहरूका लागि कम लागत प्रदान गरिएको छ। संग्रहालयको दिनमा सबै नागरिकहरूको लागि निःशुल्क पहुँच उपलब्ध छ, साथै साथका नागरिकहरूको निश्चित श्रेणीहरू निरन्तर रूपमा स्थानीय इतिहास संग्रहालय (कलुगा) जान सकिन्छ। ठेगाना: पुष्किन सडक,4भवन।
कलुगा को उडानहरु
धेरै ऐतिहासिक घटनाहरू, वास्तुकलाका स्मारकहरू, सांस्कृतिक केन्द्रहरूले पर्यटक पर्यटकको कलुगा गर्न सक्छन्। स्थलहरू त्यस्ता मात्रामा प्रस्तुत गरिएका छन् जुन एक दिनमा उनीहरूको साथ परिचित हुन सम्भव छैन। दसवटा महत्त्वपूर्ण स्थानहरू, जहाँ यो भेट्न लायक छ, समावेश गर्दछ:
1701 मा सेन्ट जर्ज कैथेड्रल बनाइयो।
17 औं शताब्दी को रूपान्तरण को चर्च, किले को क्षेत्र मा स्थित छ।
ओप्टिना रेजर्ट (कलुगा देखि 70 कि। मी दूर)। दिग्गजको अनुसार, मठ 19औं शताब्दीको अन्ततिर पश्चात पश्चात पश्चात ओप्टिया द्वारा स्थापित गरिएको थियो। परिसरको इलाकामा एउटा चमत्कारिक वसन्त हो, दोस्रो पवित्र वसन्त झिज्द्रा नदीको किनारमा स्थित छ।
सियोस्कोवस्की राज्य कस्मेटिक संग्रहालय। यसमा स्पेस अन्वेषणमा समर्पित रूसमा सबैभन्दा ठूलो विस्तार छ। रकममा 600 हजार वस्तुहरू भण्डार गरिएका छन्, पहुँचमा 400 हजार इकाइहरू।
व्यापारीहरु Korobov को च्याम्बर। यो 17 औं शताब्दी को पुरातन रूसी वास्तुकला को वास्तुकला स्मारक हो।
एक पत्थर पुल जसले Berezuevsky ravine को किनारों संग जोड दिए। यो युग 1785 मा बनाइयो र रूसमा यस्तो प्रकारको सबैभन्दा ठूलो पत्थर संरचना हो। लम्बाइ 160 मीटर छ, र चौडाई 20 मीटर भन्दा बढी छ। मध्य भाग पुरातत्वसँग दुई-स्तरको भाग हो।
ओल्ड टर्ग स्क्वायरमा गोस्स्टिभ डिभोर। भवन र 18 औं शताब्दीमा स्क्वायरको मिति, निर्माणमा पुरानो भाडाको स्थानमा व्यापारीहरु द्वारा शुरु गरिएको थियो। 2015 मा बहाली आयोजित गरियो।
कलुगा को मोती जोलोटारेव को सम्पत्ति हो, जहां स्थानीय ढोका को संग्रहालय स्थित छ।
वास्तुकला र जीवनको शिल्प संग्रहालय। यसको पारंपरिक लोक शिल्प, मिट्टी को खिलौने को एक ठूलो विस्तार को इतिहास को एक व्यापक विस्तार छ। केही 17-18 शताब्दीका मितिहरू देखाउँछन्।
निकोला-लेनिभेट्स, राष्ट्रिय उद्यान "युग्रा" क्षेत्रमा एक गाँउ, जहाँ वार्षिक कला उत्सव "आर्स्टोनेनी" हरेक वर्ष आयोजित हुन्छ। कलाकारहरूको क्षेत्रमा र आर्किटेक्टहरू प्राकृतिक सामग्रीका अनूठा मूर्तिकलाहरू सिर्जना गरिएका छन्, जुन रिजर्भमा भरिएको छ।
यो कलगागा शहरमा आएको कुन पर्यटकले देख्न सक्ने पूर्ण सूची होइन। सहरहरु शहर मा र यस क्षेत्र मा स्थित छ। एक अनोखी शमंडर मठ Shamordino को गाँउ को नजिकै स्थित छ। केन्द्रीय काजल कैथेड्रल 15 उच्च पहाडहरू संग सजाइएका छन्, सामान्य समाधान पुरानो रूसी शैलीमा उल्लेख गर्दछ, जसलाई मनपर्दो रूपमा महाकाव्य कथाहरू देखाउँछन्। Vorobievo सम्पत्ति, सिडिडेन को स्मारक, मास्टर्स को घर र अधिक केहि एक नजिक को देखने को लायक हो।
Novomikhailovsky मा आराम: recreation centers, camps
अंडमान खाडीमा सर्वश्रेष्ठ: क्रबीका द्वीपहरू अतिथिहरूको लागि पर्खिरहेका छन्!
Kirkenes, नर्वे: आकर्षण र फोटोहरू
"मिलेनियम" (पुल): विभिन्न देशहरूको वास्तुकला कृति
डाल्फिनरीम मा VDNH - एक स्थान जहाँ तपाईं डल्फिन संग परिचित हो सकते हो!
राइबिन्स्क संग्रहालय रिजर्व - शहर को दृश्य-हेर्दै
नरम खोल सामाग्री - यो के हो र कसरी यो राम्रो हो?
गर्भावस्था GW संभव छ कि छैन भनेर?
दाना "hyaluronic एसिड" (150 मिलीग्राम, "Evalar"): समीक्षा
निसान सान्र्रा: सर्वश्रेष्ठ बिक्रि जापानी सिजनहरूको निर्दिष्टता
अजवाइन मूल: लाभ र हानि। अजवाइन को गुण र मानव शरीर मा आफ्नो सकारात्मक प्रभाव
कसरी बास्केटबल खेल देखाउनुहोस्
त्वरणको समयमा एक डीजल इन्जिनमा टर्बाइनको बिस्तार: समस्याको सम्भावना कारणहरू र समाधान
राम्रो अङ्गुरको: समीक्षा, वर्णन
पैसा - यो छ ... पैसा: प्रकृति, प्रकार र कार्यहरु
कामदार मौरीले के हुन्? के सेक्स कामदार मौरीले? को मौरी परिवारको संरचना